DVD format bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na-eji formats n'ụwa nile na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na a ọrụ abụghị naanị n'anya na-egwu a Ọkpụkpọ ma e nwere ọtụtụ ihe CD si si n'ebe ke ahịa ma na-echekwa na-enyere ndị na-ekiri ha mmasị fim na-egosi na ala na afọ ojuju. Ọbụna n'ụlọ ọrụ ndị na-ụtọ nke na-akpọ DVD videos mgbe nbudata ha site bit iyi ma ọ bụ ị ka iyi. The mkpa nke hour bụ ya mere ka a oyi akwa na nwere ike igwu niile ndị a faịlụ na ala.
Part 1: Gịnị Windows Media Player apụghị egwu gị DVD?
Nkebi nke 2: Popular DVD decoders
Nkebi nke 3: Wụnye Ike DVD
Nkebi nke 4: tọghata DVD ka windows Media Player dakọtara format
Ọ bụ ọzọ otu n'ime ajụjụ ndị kasị mkpa nke e nwere ọtụtụ azịza na isi na ihe ndị kasị chere ihu nke na nke a bụ na a onye ọrụ nwere ike agaghị akpọ faịlụ mgbe a dakọtara DVD decoder na-adịghị arụnyere. Njehie kpaliri na a dakọtara DVD decoder na-adịghị arụnyere na Ya mere nke a na-ihu.
Iji mee ka n'aka na okwu a kpebiri na onye ọrụ bụ ike n'ụzọ zuru ezu ahu nagide akụ nke Windows Media Player na-egwu DVD faịlụ a nkuzi e mepụtara iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe usoro na DVD decoders na-arụnyere mere na onye ọrụ nwere ike nweta ihe zuru uru nke na-eji DVD playback ọrụ. Ndị kasị mkpa n'ókè nke na a ga-kwuru bụ na ọbụna ma ọ bụrụ na DVD format e ticked n'ime dịnụ format ka onye ọrụ ga-enwe ike ịdị na-egwu faịlụ dị ka DVD decoder dị mkpa iji jide n'aka na faịlụ ma ọ bụ DVD bụ keere ụdị CD. Anọghị nke DVD decoder ga-bụghị naanị iduga mbipụta ma ọ ga-hụ na ihe bụ nsogbu mgbe kpebiri na nke a. Ya mere, azịza na n'elu ajụjụ na a onye na-adịghị ike inweta ihe kasị mma na nke a dị ka a DVD decoder na-adịghị arụnyere na na na achọrọ faịlụ Ọkpụkpọ na-adịghị na-akwado site na windows media ọkpụkpọ.
E nwere ọtụtụ DVD decoders na onye ọrụ nwere ike ibudata iji jide n'aka na nsogbu ahụ na-kpebiri na DVD playback na-enwe. Otú ọ dị nke a nkuzi ga-ahụ na top 2 DVD decoders na-ẹkenam nke bụ ka ndị a:
Ike DVD decoder mepụtara Cyber ​​Link na dị na http://www.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/features_en_US.html?&r=1
Codec Decoder mkpọ mepụtara site na ụlọ ọrụ nke otu aha na dị na http://download.cnet.com/Codec-Decoder-Pack/3000-13632_4-75587126.html
Na akụkụ ikpeazụ nke ndị nkuzi ga-ahụ na onye ọrụ na-akawanye a echiche nghọta banyere nbudata, na-arụ ọrụ na echichi nke Ike DVD decoder dị ka ọ bụ ndị kasị ewu ewu DVD decoder na-eji na tinye n'ọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ mgbe chere ihu ọ bụla nke na mmekọrita DVD faịlụ egwu na-akpọ n'elu Windows Media Player.
Part3: Wụnye Ike DVD
Usoro a ga-soro e depụtara dị ka n'okpuru:
1.The onye ọrụ kwesịrị ileta URL http://www.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/features_en_US.html?&r=1 iji jide n'aka na download njikọ na-ekpughe:
2.Free download ikpe a na-ahụ na-pịrị ibudata faịlụ:
3.The faịlụ bụ ga-azọpụta ndị na desktọọpụ na mgbe ahụ gburu mere na nbudata amalite. The onye ọrụ nwere ezipụta faịlụ azọpụta ebe nakwa:
4.Once faịlụ e ebudatara onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na echichi na-eme site na abụọ na ịpị faịlụ na mgbe ahụ site na-eme n'aka na usoro a na restarted mezue usoro na zuru. The Media ọkpụkpọ ga ugbu a-enwe ike ime n'aka na DVD faịlụ na-egwuri enweghị ihe ọ bụla nke.
Part4: tọghata DVD ka windows Media Player dakọtara format
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na nke kasị Mmanu usoro nke na-eme n'aka na DVD na-abụghị nanị na-egwuri ma yiri format na-converted ụfọdụ ndị ọzọ nke a na-akwado site na windows media ọkpụkpọ. Iji mee ka n'aka na okwu a kpebiri a nkuzi ga-eme ka n'aka na ọkaibe video convertor ie Wondershare Video Convertor Ultimate na ẹkenam mere na onye ọrụ nwere ike ka ndị kasị mma ojiji nke wuru na technology nke usoro ihe omume ahụ nke nwere e mepụtara site Wondershare iji jide n'aka na ọ bụrụ na nke etịbe maka ndị ọzọ oge mgbe ahụ, a convertor enwere na-enyere ndị ọrụ na nke a. The nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro na e agbakwunyere na screenshots ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ na-aghọ maara nke ọma eziokwu na-eme ka n'aka na DVD dakọtara format na-egwuri na Windows Media Player enweghị ihe ọ bụla nke na ihe isi ike. Tụkwasị na nke a na klas nke usoro ihe omume dị otú ahụ na ọ na-ekwe onye ọrụ iji jide n'aka na ọ fọrọ nke nta 150+ formats na-converted ọ bụla ọzọ na onye ọrụ na-ọkọkpọhi mkpebi na nke njikwa nke mbipụta na-ahụkarị na ọdịdị dị ka ụlọ ọrụ na-akwado nnukwu online obodo na nke a dị ka mma.
Zuru ezu usoro na ga-hụ nke mkpebi e kwuru ka ndị a:
1.The URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html bụ na-ịchọgharịrị iji jide n'aka na ihe omume ahụ ebudatara ma wụnye n'ihi na onye ọrụ. Ọ bụ ka e gbuo nakwa:
2.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ịgbakwunye faịlụ ka isi interface site na ịpị tinye faịlụ buttons na nke a n'ihu n'ihu:
3.The mmepụta format a na-ahụ na-ahọrọ iji jide n'aka na usoro na-akwado site na Windows Media Player na-ahọrọ ka n'ihu n'ihu:
4.In ikpeazụ nzọụkwụ onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na tọghatara button na-emi odude na-enwe iji jide n'aka na akakabarede nke faịlụ amalite na mkpokọta nke banyere DVD playback na-kpebiri na zuru:
Part5: Comparison Isiokwu
Metrics na ụzọ
Easy ma ọ bụ ike
Ike DVD Siri ike Mụ mgbe ụfọdụ
Wondershare Video Convertor Ultimate Nnọọ mfe mejuputa Nnọọ Anụ
Si na tebụl n'elu ya nwere ike hụrụ na Wondershare video Convertor Ultimate bụ ihe kasị mma software iji jide n'aka na DVD na-egwuri. Ihe mere na-aha dị ka n'okpuru:
Ọ dị mfe iji mejuputa n'ihi na eziokwu na interface bụ nnọọ ọrụ enyi na enyi na Wondershare onwe ya mere ka n'aka na ọ na-nọ mfe na mgbe gbanwere n'agbanyeghị nke mmelite na-arụnyere na nke a.
Ihe omume ahụ bụ anụ dị ka ọ na-eme n'aka na ọkaibe mmelite na na-tọhapụrụ site na ụlọ ọrụ na-emejuputa atumatu n'ime oge iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma nakwa onye kasị nke nke akwusighi na-kpebiri ozugbo na ihe niile.
> Resource> WMP> 2 ụzọ na-egwu DVD na Windows Media Player